Comet Neowise: astaamaha, asalka iyo u fiirsashada | Saadaasha Shabakadda
Caalamka oo dhan waxaa jira tiro badan oo majaajillo ah oo saameyn ku yeelan kara wareeggayaga. Midkood waa Comet Neowise. Waa mid ka mid ah majaajilooyinka ugu ifaya ee laga arkay dhulkeenna. Waxaa la arki karay Juun 2020 waxayna ahayd mid cajiib ah.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, asalka iyo xiisaha ay leedahay majaajiliste Neowise.
2 Asalka Comet Neowise
3 Jadwalka Comet Neowise
4 Kite oo sii fogaanaya
Comet Neowise wuxuu leeyahay ahmiyad cilmiyeed weyn. Waxaa laga filan karaa inay yeelato dhalaal heer 2 ah, taas oo ah, inaad yeelato dhalaal sare, taasoo noo ogolaaneysa inaan meel fog ka aragno iyadoon loo baahnayn telescopes ama binoculars. Haddana, kani waa maanso ka socota Oort Cloud. Xogtani waa muhiim maxaa yeelay majaajiliisteyaashaan badanaa waxay ka kooban yihiin walxo cayriin ah oo ka yimid nebulae oo sameeyay nidaamkeenna qorraxda. Sidaas darteed, waxay bixiyaan macluumaad badan oo ku saabsan asalka koonkan.
Tani waa mid ka mid ah majaajilooyinka ugu ifaya ee soo maray dhulka tobanaankii sano ee la soo dhaafay, taas oo nooga dhigeysa fursad aan ku aragno indhaha qaawan inta lagu jiro bishan oo aan mar kale dhex marno dhulkeenna, pdib loogu noqdo, qiyaastii 6.800 sano.
Waxaa la arki lahaa usbuuca 11-ka ilaa 17-ka Luulyo. Comet Neowise ayaa la arki karay wax yar ka hor qorrax soo baxa (qiyaastii 6 subaxnimo), isagoo ka hadlaya Spain (cirifka woqooyi). Si aad u hesho, waa inaad kaliya eegto woqooyi-bari, xagga hoose ee jihada. Heer hoose, waxaad ku arki laheyd caqabadaha yar ee ku soo food leh. Sidoo kale, waxay ahayd muhiim in la dhigo aag leh wasakh yar oo iftiinka ah si loo awoodo cirka oo dhan si fiican.
Waqtiga ugu dhow ee ay ku soo dhowaato Dunida waxay ahayd 23-kii Luulyo, waxayna ugu dhowaayeen 103 milyan oo kiiloomitir dhulka u dhow cabbirka 4. Masaafada way balaarantahay oo qatar waxyeello ah malaha, sidaa darteed ma jirto sabab looga walwalo dhacdadan. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo taariikhda ugu dhow Dunida ay ahayd 23-kii Luulyo, Comet Neowise waxay u muuqatay isha qaawan, xooggiisuna wuxuu ahaa heerka 2 illaa Arbacadii, Luulyo 15.
Asalka Comet Neowise
Taliyaha waxaa laga helay 27-kii Maarso, 2020 sawirro infrared ah. Waxaa la helay intii lagu gudajiray mashruucii Ujeedada-Dunida ee NASA's Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE) telescope space. Telescope-ka booskani wuxuu awooday inuu ogaado shay cabbirkiisu dhan yahay 17 oo matalaya mid, 0.8 'cabir ahaan xagal ah Waxyar in yar kormeerayaashu waxay awoodeen inay xaqiijiyaan waxqabadkooda sida jilaawe, iyagoo cabiraya miyir doorsoon oo kooma ah illaa 2 'dhexroor iyo 20' 'dabo dhaadheer.
Comet C / 2020 F3 (NEOWISE) wuxuu leeyahay meerto u eg parabolic marka ma ahan wax cusub, marinkiisii ​​hore wuxuu ahaa qiyaastii 3.000 sano ka hor. Khatarta soo socota waxay noqon doontaa Julaay 3, 2020 meel u jirta 0.29 AU oo keliya qorraxda, iyo habka ugu dhow ee Dunida. dhawr maalmood ka dib markay ahayd July 23, 2020 at 0.69 AU oo ka socota meeraheenna.
Waxay laheyd koror aan caadi aheyn oo dhalaalaya waxa aan ku baran jirnay jilayaasha kale. Wareegga iftiinka ayaa xasilloonaa bishii Maajo oo dhan iyadoo cabbirro cabbirkiisu dhan yahay m0 = 7. Qiimayaashani waxay u dhigmaan xuduntii qiyaastii laba kiilomitir oo dhexroor ah iyo xarakaad sare oo n = 5 ah. Waa inaad ogaataa inuu jiro tusmo muujineysa halista kala daadsanaanta jilaa-weyne inta lagu jiro dariiqa ay marayso. Xaaladdan oo kale, Comet Neowise waxay leedahay khatar suus dhexdhexaad ah oo ku saleysan xadka badbaadada Bortle.
Jadwalka Comet Neowise
10-kii maalmood ee ugu horreeyay bisha Juun, dhalaalka Comet Neowise wuxuu sii waday inuu kordho, isagoo gaaray heer 7. Sida ku xusan isbeddelka illaa iyo Maajo, dhalaalkiisu wuxuu ahaa mid ka hooseeya sidii la filayay, in kasta oo ay taasi sababi karto joog hoose ee kormeerayaasha koonfurta. Haddii aan daraasadno cabirka miyir-beelka la arkay, sidoo kale wuu yaraaday intii lagu jiray taariikhahaas oo uumiga ayaa kordhay. Waxaas oo dhan waxay xaqiijiyeen in qiyaasaha ay saameeyeen joog hoose iyo fiidnimo.
Nasiib wanaagse, intii u dhaxeysay 22-kii ilaa 28-kii Juun, ayaa majaajilluhu u soo dhowaaday wax ka yar 2 ° Qorraxda, isagoo galaya aaladda kaamirada LASCO-C3 ee telescope-ka bannaan ee SOHO, telescope-kan loogu talo galay u kuurgalida jawiga bannaanka ee Qorraxda ayaa leh coronagraphs ay Qariyaan iftiinka tooska ah ee qoraxda diskka u ogolaanaya inuu isdiiwaangaliyo, marka lagu daro qiiqa cadceedda, walxaha dhalaalaya ee ugu soo dhowaada si angular ah sida ay tahay dhacdooyin badan oo majaajillo ah.
Sidaa darteed, waxaan awoodnay inaan ku fiirsanno meesha sida ay majaajilisteyaasha ugu soo dhowaadeen halista xaalad wanaagsan, soo saarida dabada boodhka iyo dabada ion, waxayna noo ogolaaneysaa inaan cabirno dhalaalkooda. Baaxadda dhalaalka oo kordhay 2 ilaa 3 6 maalmood gudahood. Tani waxay xaqiijisay inay ku sii jirtay isla wareegga nalka la saadaaliyay. Markay tahay Luulyo 11, 2020, jilaaga ayaa durba sifiican loogu daawan karaa isha qaawan ee ka hoosaysa xiddigta Capella del Auriga, weli waaberigii fiidkii laakiin si muuqata ayaa uga sarreeya maalmo ka hor.
Kite oo sii fogaanaya
Ka dib markii ugu dhowaa ee Dunida, bishii Luulyo 23, masaafada ka timid Mareykanka waxay ahayd 0,69. Adduunkeenna, dhalaalka majaajillada ayaa sii waday inuu sii yaraado illaa ay ka noqotay mid aan lagu arki karin isha qaawan ee mugga weyn ee 4.5. In kasta oo lagu eegay muraayadaha indhaha, inkasta oo iftiinka dayaxa, dabada ay wali tahay mid dhalaalaysa oo si buuxda loo arki karo. Miyir-beelkiisu wuxuu ku jiray inta u dhexeysa xagal qiyaastii 8 daqiiqo (300.000 km masaafo buuxda), iyo uumiga ayaa sii waday ilaa heerka 6 welina wuu xooganaa. Dhererka dabada ee lagu arkay binoculars wuxuu ahaa 3 darajo.
Sidaad u jeeddoba, riwaayaddani waxay ka mid ahayd kuwa ugu caansan uguna fiirsada khabiirada iyo hiwaayaddaha. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto majaajilista Neowise iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Comet Neowise